Ra’yi: 4.5 illaa iyo 2000 Carta ayaa lagu dhaqmayay qabiil boos gaar ah loo xirana ma jirin. - Latest News Updates
Ra’yi: 4.5 illaa iyo 2000 Carta ayaa lagu dhaqmayay qabiil boos gaar ah loo xirana ma jirin.
Waxaan dhagaystay xildhibaan Maxamuud Yaxye oo warbaahinta ka sheegay in xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka lagu gaar yeelo murashaxiinta Digil iyo Mirifle, maaddaama mas’uulka banneeyay uu ka soo jeedo beeshaas.
Sidaas xukuumadda ayaa doonnaysa, ayaan maqlay..
Waddanka wuxuu leeyahay Dastuur iyo xeer xaq siiya qof walba oo muwaaddin ah in uu u tartamo boos walba oo bannaanaada, muwaaddin walba oo shuruudaha buuxiya uu u tartami karo.
4.5 illaa iyo 2000 Carta ayaa lagu dhaqmayay qabiil boos gaar ah loo xirana ma jirin.
2009 markii uu Cabdullaahi Yuusuf is casilay, waxaa RW ahaa Nuur Cadde. Sheekh Shariif lama dhihin booskaan qabiilkii ka baxay ayuu u xiran yahay umana tartami kartid.
Dastuurkaan kooxba danteeda ay u fasirato waxaa ku soo xusuustay sheeko Maraykanka ka dhacday 2010.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa mar walba ku eedeynayay Obama inuu ku xadgudbayo xuquuqda dadka Masiixiga ah, ayagoo ku andacoonaya in dastuurka uu leeyahay qodobka xurriyadda diimaha “First Amendment”.
Sannadkii 2010, hey’ad Muslim ah ee la yiraahdo Cordoba House ayaa waxay damacday in ay masaajid ka dhisto halkii daarihii qaraxii Sept 11 uu ka dhacay. Obama wuu taageeray asagoo cuskanaya isla qodobkii xurriyadda diimaha, hase ahaatee xisbigii Jamhuuriga way ka soo horjeesteen.
Majaajiliistaha caanka ah Stephen Colbert oo la yaaban dhaqanka xisbiga Jamhuuriga ayaa wuxuu yiri, ” kuwan kuma dhaqmaan “Constitution” ee waxay ku dhaqmaan “guts-titution” = guts, waa sida aad dareemayso.
Hadda siyaasiyiinta Soomaali kuma dhaqmaan Dastuur, malaha waxay ku dhaqmaan Kas-tuur.
Jagada Guddoomiyaha ha lagu yaaco, in qolo loo xirana ma aha Dastuur.
Qalinkii: Hassan Adan Hosow